Ogaden News Agency (ONA) – Maalinta Xasuuqa Ogadenia oo Dhagaxlay Laga Xusay.
Maalinta Xasuuqa Ogadenia oo Dhagaxlay Laga Xusay.
Maanta oo Axad ahayd taariikhduna ay kubeegnayd 25/3/18 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay kaqabsoomay xaflad balaadhan oo lagu maamuusayay xaska maalinta xasuuqa Ogadenia.
Xafladan oo aad loosoo agaasimay ayaa furantay abaare 10:00 subaxnimo, waxaana xaflada lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soojeediyay hogaanka arimaha diinta ee faraca midnimo.
Sheekha ayaa wacdigiisa xooga kusaaray cabsida Allaah iyo sida loogudan lahaa waajibaanka uu adoomihiisa saaray, iyo waliba sida uu waajib uyahay in lala jihaado gaalada iyo gaal u ekaha.
Intaas kadib xoghayaha faraca Midnimo ayaa warbixin guud usoo bandhigay xubnaha iyo taageerayaasha hoolka soobuux dhaafiyay, wuxuuna xoghayuhu bulshada lawadaagay wararkii ugu dambeeyay ee Ogadenia iyo maxaabiista lagu bahdilayo dagmada Goday.
Sidoo kale waxaa madasha laga akhriyay qormo dheer oo kahadlaysa bisha FEB: iyo waxyaabaha ay xambaarsan tahay waxaana bulshada dib loo xasuusiyay xasuuqii baahsanaa ee dhacay bishii labaad ee sanadkii 1994.
Intaas kadib waxaa lagu soo dhaweeyay qaar kamid ah Odayaasha Soomaalida Ogadenia oo shirka soo xaadiray waxayna Odayaashu kawarbixiyeen wixii ay usoo joogeen iyo dhacdooyin xanuun badan oo ina dhaafay.
Sidoo kale waxaa hal hal loogu soo dhaweeyay marti kala duwan oo kakala socotay faracyada JABSO sida Gaarissa, Xagardheere iyo Ifo waxayna xubnihii waftiga ahaa soojeediyeen khudbado dhaxal gal ah.
Intaas kadib waxaa masraxa lagu soo dhaweeyay koox faneedka Hilaac oo suugaan kala duwan oo xasuuqa Ogadenia kahadlaysa kasoo jeediyay xaflada. Waxayna kooxdu badashay jawiga shirka oo noqday goob murugo.
Guntii iyo gunaanadkii waxaa si quruxbadan kusoo dhamaaday xafladii lagu xusayay xasuuqa Ogadenia, waxayna xubnuhu umuuqdeen kuwo wajiyadoodu ay shucuur kamuuqatay.